ရေဓာတ်ဖြည့်တင်းဖို့ အကောင်းဆုံး ရေအစားထိုး စားစရာ – Gentleman Magazine
ရေဓာတ်ဖြည့်တင်းဖို့ အကောင်းဆုံး ရေအစားထိုး စားစရာ
လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်အပြီး ရေ ၈ ခွက်လောက် သောက်လိုက်ရမှ အားရပါသလား?? တခြား ရေအစား သောက်စရာတွေ ရှိပါသေးတယ်။ ဟို အားဖြည့် အချိုရည်တွေကို ပြောနေတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ရေအစား တခြား အာဟာရတွေကိုပါ ပြည့်စေနိုင်တဲ့ သောက်စရာတွေ ရှိပါသေးတယ်။ အဲဒါတွေကို ဖတ်ပြီး ရင် သင် ရေသောက်ချင်တော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ အဲဒါတွေကတော့
နို့မှာပါတဲ့ ဆိုဒီယမ်ဟာ သင့်တင့်တဲ့ အနေအထားမှာ ရှိပါတယ်။ နို့မှာပါတဲ့ အဆီက ရေစုပ်ယူမှုအားကို လျော့နည်းစေလို့ အဆီနည်းနိုိ့ကို အစားထိုး သောက်သင့်ပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ် ချော့ကလက်နို့ ပြောင်းသောက်ပါ။ အဲဒိမှာ ပရိုတင်းတွေ၊ ဆိုဒီယမ်တွေ၊ ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်းတွေ အများကြီးပါတာကြောင့် အမြနမဆုံး အားပြန်ပြည့်စေပါတယ်။
ကြက်သားခေါက်ဆွဲပြုတ်တစ်ခွက်မှာ ဆိုဒီယမ် ၈၄၀ မီလီဂရမ် ပါဝင်လို့ ဆားဓာတ်ပြန်လည် ဖြည့်တင်းနိုင်ပြီး စုပ်ယူရလွယ်ကူအောင် ကာဗို ဟိုက်ဒရိတ် ၁၄ မီလီဂရမ်လဲ ပါပါသေးတယ်။ ဆောင်းတွင်း အပြင်ထွက် အားကစားလုပ်ရင် ဓာတ်ဘူးလေးနဲ့ ထည့်ယူသွားပါ။
ဖရဲသီး။ ရေဓာတ် ၉၂ ရာနှုန်းပါဝင်ပါတယ်။ တစ်ခွက်ကို စုပ်ယူဖို့ လွယ်ကူတဲ့ Carb ၁၂ ဂရမ်နဲ့ ၁၇၃ ဂရမ် ပိုတက်ဆီယမ်လဲ ပါဝင်ပါသေးတယ်။ အဲဒါက ဆားဓာတ် ဖြည့်တင်းဖို့ ဆိုဒီယမ်နဲ့ တွဲအလုပ်လုပ်မှာပါ။ ဖရဲသီးမကြိုက်ရင်တော့ လိမ္မော်သီး၊ ဂရိတ်ဖရုသီး စားလို့ရပါတယ်။
ရေခဲချောင်းစားရတာ ကလေးတွေလို ငယ်မူငယ်သွေး ပြန်စေပါတယ်။ အဲဒါက အရည်ဓာတ် ဖြည့်တင်းပေးမယ်။ ကိုယ်အပူချိန် လျော့ကျအောက် ကူညီပေးမယ်။ စွမ်းအင်ကိုလဲ ဖြည့်တင်းပေးမှာပါ။
ရေတစ်ဘူးနဲ့တောင် ရေဆာမပြေရင်တော့ ညစာကို ဟင်းသီးဟင်းရွက်သုပ်သာ မှာလိုက်ပါတော့။ ဂေါ်ဖီထုပ်မှာ ရေဓာတ် ၉၀ ရာနှုန်း ပါပါတယ်။ အသီးအရွက်ချည်း မစားချင်ရင် ကြက်ကင်၊ ငါးကင်လေးပါ မှာလိုက်ပါ။ အစိမ်းရောင် အသီးအရွက်ကိုပါ ရောစားပါ။
ထမင်းဟာ ထမင်းချက်စဉ်မှာ ရေအများကြီး စုပ်ယူထားလို့ သင့်ကို အရည်ဓာတ် ဖြည့်တင်းပေးမှာပါ။ ထမင်းနဲ့ တူတူ တွဲစားရတဲ့ တရုတ်စာတွေကလဲ လိုအပ်တဲ့ ဆားဓာတ်ကို ဖြည့်တင်းပေးမှာပါ။ ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေကို သံလွင်ဆီနဲ့နယ်၊ ပြီး ထမင်းပေါင်းအိုးထဲ ထမင်းနဲ့တူတူထည့်ပြီး ပေါင်းစားကြည့်ပါ။
Soda (Coke, Pepsi, Sprite . . . )
ဒီ Caffeine, Sugar, Water Combo ဟာ ဆိုဒါကြိုက်သူတွေအတွက် အကောင်းဆုံး ရေဓာတ်ဖြည့်တင်းပစ္စည်းပါပဲ။ Diet ပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ Normal ဖြစ်ဖြစ် အရေးမကြီးပါဘူး။ ဆားငန်တဲ့ မုန့်လေးနည်းနည်းပါ စားထားလိုက်ရင် ပိုအဆင်ပြေပါမယ်။
Gym ကနေ အိမ်အပြန်မှာ ရေခဲမုန့် တစ်ခွက်လောက် ဝင်စားသွားလိုက်ပါ။ အဲဒါဟာ ရေဓာတ် ဖြည့်တင်းပေးနိုင်ပါတယ်။ တစ်ခွက်ပဲ စားပါ။ မပိုပါနဲ့။
ကဲ.. ဇာတ်လိုက်ကြီး လာပါပြီ။ တချို့တွေကတော့ ဘီယာက ရေပိုငတ်စေတယ်လို့ ငြင်းကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Beer Shandy လို့ခေါ်တဲ့ ဘီယာတစ်ဝက် Sprite တစ်ဝက်ဟာ အဆင်အပြေဆုံးပါတဲ့။ ဘီယာ မသောက်တတ်ရင်တော့ ၁ ကနေ ၉ အထိနဲ့ပဲ အဆင်ပြေအောင် ကြိုးစားပါ။ ကြိုက်တတ်ရင်တော့ ဒါကိုပဲ ရွေးကြမယ်ဆိုတာ သိပါတယ်။ အရမ်း မများပါစေနဲ့။
ရဓောတျဖွညျ့တငျးဖို့ အကောငျးဆုံး ရအေစားထိုး စားစရာ ၁၀ မြိုး
လကေ့ငျြ့ခနျး လုပျအပွီး ရေ ၈ ခှကျလောကျ သောကျလိုကျရမှ အားရပါသလား?? တခွား ရအေစား သောကျစရာတှေ ရှိပါသေးတယျ။ ဟို အားဖွညျ့ အခြိုရညျတှကေို ပွောနတော မဟုတျပါဘူး။ ရအေစား တခွား အာဟာရတှကေိုပါ ပွညျ့စနေိုငျတဲ့ သောကျစရာတှေ ရှိပါသေးတယျ။ အဲဒါတှကေို ဖတျပွီး ရငျ သငျ ရသေောကျခငျြတော့မှာ မဟုတျပါဘူး။ အဲဒါတှကေတော့
နို့မှာပါတဲ့ ဆိုဒီယမျဟာ သငျ့တငျ့တဲ့ အနအေထားမှာ ရှိပါတယျ။ နို့မှာပါတဲ့ အဆီက ရစေုပျယူမှုအားကို လြော့နညျးစလေို့ အဆီနညျးနို့ကို အစားထိုး သောကျသငျ့ပါတယျ။ ဒါမှမဟုတျ ခြော့ကလကျနို့ ပွောငျးသောကျပါ။ အဲဒိမှာ ပရိုတငျးတှေ၊ ဆိုဒီယမျတှေ၊ ဓာတျတိုးဆနျ့ကငျြပစ်စညျးတှေ အမြားကွီးပါတာကွောငျ့ အမွနမဆုံး အားပွနျပွညျ့စပေါတယျ။
ကွကျသားခေါကျဆှဲပွုတျတဈခှကျမှာ ဆိုဒီယမျ ၈၄၀ မီလီဂရမျ ပါဝငျလို့ ဆားဓာတျပွနျလညျ ဖွညျ့တငျးနိုငျပွီး စုပျယူရလှယျကူအောငျ ကာဗို ဟိုကျဒရိတျ ၁၄ မီလီဂရမျလဲ ပါပါသေးတယျ။ ဆောငျးတှငျး အပွငျထှကျ အားကစားလုပျရငျ ဓာတျဘူးလေးနဲ့ ထညျ့ယူသှားပါ။
ဖရဲသီး။ ရဓောတျ ၉၂ ရာနှုနျးပါဝငျပါတယျ။ တဈခှကျကို စုပျယူဖို့ လှယျကူတဲ့ Carb ၁၂ ဂရမျနဲ့ ၁၇၃ ဂရမျ ပိုတကျဆီယမျလဲ ပါဝငျပါသေးတယျ။ အဲဒါက ဆားဓာတျ ဖွညျ့တငျးဖို့ ဆိုဒီယမျနဲ့ တှဲအလုပျလုပျမှာပါ။ ဖရဲသီးမကွိုကျရငျတော့ လိမ်မျောသီး၊ ဂရိတျဖရုသီး စားလို့ရပါတယျ။
ရခေဲခြောငျးစားရတာ ကလေးတှလေို ငယျမူငယျသှေး ပွနျစပေါတယျ။ အဲဒါက အရညျဓာတျ ဖွညျ့တငျးပေးမယျ။ ကိုယျအပူခြိနျ လြော့ကအြောကျ ကူညီပေးမယျ။ စှမျးအငျကိုလဲ ဖွညျ့တငျးပေးမှာပါ။
ရတေဈဘူးနဲ့တောငျ ရဆောမပွရေငျတော့ ညစာကို ဟငျးသီးဟငျးရှကျသုပျသာ မှာလိုကျပါတော့။ ဂျေါဖီထုပျမှာ ရဓောတျ ၉၀ ရာနှုနျး ပါပါတယျ။ အသီးအရှကျခညျြး မစားခငျြရငျ ကွကျကငျ၊ ငါးကငျလေးပါ မှာလိုကျပါ။ အစိမျးရောငျ အသီးအရှကျကိုပါ ရောစားပါ။
ထမငျးဟာ ထမငျးခကျြစဉျမှာ ရအေမြားကွီး စုပျယူထားလို့ သငျ့ကို အရညျဓာတျ ဖွညျ့တငျးပေးမှာပါ။ ထမငျးနဲ့ တူတူ တှဲစားရတဲ့ တရုတျစာတှကေလဲ လိုအပျတဲ့ ဆားဓာတျကို ဖွညျ့တငျးပေးမှာပါ။ ဟငျးသီးဟငျးရှကျတှကေို သံလှငျဆီနဲ့နယျ၊ ပွီး ထမငျးပေါငျးအိုးထဲ ထမငျးနဲ့တူတူထညျ့ပွီး ပေါငျးစားကွညျ့ပါ။
ဒီ Caffeine, Sugar, Water Combo ဟာ ဆိုဒါကွိုကျသူတှအေတှကျ အကောငျးဆုံး ရဓောတျဖွညျ့တငျးပစ်စညျးပါပဲ။ Diet ပဲ ဖွဈဖွဈ၊ Normal ဖွဈဖွဈ အရေးမကွီးပါဘူး။ ဆားငနျတဲ့ မုနျ့လေးနညျးနညျးပါ စားထားလိုကျရငျ ပိုအဆငျပွပေါမယျ။
Gym ကနေ အိမျအပွနျမှာ ရခေဲမုနျ့ တဈခှကျလောကျ ဝငျစားသှားလိုကျပါ။ အဲဒါဟာ ရဓောတျ ဖွညျ့တငျးပေးနိုငျပါတယျ။ တဈခှကျပဲ စားပါ။ မပိုပါနဲ့။
ကဲ.. ဇာတျလိုကျကွီး လာပါပွီ။ တခြို့တှကေတော့ ဘီယာက ရပေိုငတျစတေယျလို့ ငွငျးကွပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ Beer Shandy လို့ချေါတဲ့ ဘီယာတဈဝကျ Sprite တဈဝကျဟာ အဆငျအပွဆေုံးပါတဲ့။ ဘီယာ မသောကျတတျရငျတော့ ၁ ကနေ ၉ အထိနဲ့ပဲ အဆငျပွအေောငျ ကွိုးစားပါ။ ကွိုကျတတျရငျတော့ ဒါကိုပဲ ရှေးကွမယျဆိုတာ သိပါတယျ။ အရမျး မမြားပါစနေဲ့။
Previous: လေယာဉ်ပျံပေါ်က လေထဲမှာ အဆိပ်တွေ ပါနေပါသလား
Next: ယောက်ျားနို့တွေ ဘယ်လို အပျောက်ဖျောက်မလဲ